musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » 10 zvakajairika zvikanganiso zveairport izvo zviri kukudyira mari
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Nekusazvisiya iwe nguva yakakwana yekuenda kunhandare yendege, kutarisa-mukati uye kuwana kuchengetedzeka kwakapfuura, unoisa mukana wekutadza kubhururuka nendege. Izvi zvinonyanya kudhura kana iwe wakatsvaga nendege isingape mari yekudzorera.
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti nhandare zhinji dzinobhadharisa vafambi kwenzvimbo dzekuchaja nhare.
Ita shuwa yekurongedza zvako tudyo pamberi pendege kuti uchengetedze mari yekushandisa kana iwe wasvika kwauri kuenda.
Tora mari yako ichinjwe mune yakawanda nguva usati wasvika kunhandare yendege yako.
Nevazhinji vedu tichienda parwendo rwedu rwekutanga rwepasi rese munguva yakareba kwazvo, nyanzvi dzekufambisa dzakaratidza zvikanganiso gumi zvakajairika panhandare yendege izvo zviri kukudyira mari parwendo rwako.
1. Kuwana tekisi
Nepo kuendesa tekisi kuairport kungaratidzika kunge kuri nyore, tekisi inodzokera ku nhandare yendege inogara ichidhura, kunyanya panguva yepamusoro. Kuti uchengetedze mitengo pasi, ita shuwa kuti pre-book kufambisa nendege, nenzira iyoyo hausi kungogara uchiona mita ichikwira! Neimwe nzira, tarisa kuti uone kana paine mabhazi anomhanyira kuairport, sezvo aya ari asingadhuri uye ari nani kune nharaunda.
2. Kukanganwa bhodhoro rako remvura rinodzokororwazve
Kunyange zvingaite sechinhu chidiki kurangarira kutakura, kukanganwa kutora bhodhoro remvura risina chinhu, rinozadzikiswa kuburikidza nekuchengeteka kunogona kukubhadharira nekufamba kwenguva. Kazhinji, zvitoro zveairport zvinodhura zvakanyanya kushanda, saka mitengo yacho inowanzove yakakwira.
Most dzendege iva nenzvimbo dzemahara dzemvura kwaunogona kuzadza bhodhoro rako kana wapasa chengetedzo. Nokutora bhodhoro rako rinoshandiswazve, hausi kungochengetedza mari chete asi urikuitawo zvako zvishoma nharaunda.
3. Kupaka panhandare
Vanhu vazhinji vanosarudza kupaka pa nhandare yendege nekuti ivo vanofunga kuti padyo uye nyore. Nekudaro, kupaka kwendege kunodhura, uye mune dzimwe nguva, kupaka kwendege kunogona kutodhura kupfuura tikiti yako yendege.
Kwete chete kuti inodhura, asi mota yako inogona kunge isina kuchengetedzeka zvakanyanya, sezvo ichisiiwa panze kuti itarisane nemamiriro ekunze, uye pave paine zviitiko zvakawanda zvakanyorwa zvemotokari dzinodzoka dzakakuvara.
Iwe unogona kuchengetedza nguva nemari nekutarisa mupaki dzakasiyana, kurara uye kubhururuka sarudzo. Izvi zvinokutendera iwe kupaka zvakachengeteka mota yako kuhotera kwenguva yakareba yerwendo rwako, gara kuhotera husiku hwapfuura uye zvakare kukuvhara iwe nekudzoka kubva kunhandare. Kusarudza paki, kurara nhunzi sarudzo inokupa iwe kwanyanya kukwikwidza mwero wekupaka kwako.
4. Kwete kuronga mberi
Isu tese tinoziva nhandare dzinogona kubatikana, nemitsetse inofamba-famba yekuchengetedza uye kumwe kunonoka, saka zvakakosha kuronga rwendo rwako kuenda kunhandare uye uzvipe iwe yakawanda nguva usati waenda.